Econet Iya Ikuda Kukwidza Mutengo - Tudzaa | Home
Tudzaa Jul 6, 2021 06:00 109
Econet ichaita review maprice ayo emabhanduru edata, sms ne voice 8 July. Kareview aka ndekekukwidza price chete kubva patange zvema reviews izvi vanenge vachingokwidza chete handisati ndamboona yekudzikisa.Vanhu garai matuta ma bundles zvisati zvashata. Ipapa tichaona vamwe vakutedzera anana Netone,Telecel, Zol etc week haripere. Aya ma1 chaiwo ndagara ndiri kutochema chema nema current prices avo kukwara chete.
Please take note of the scheduled review of the Voice, Data & SMS bundles effective on Thursday 8 July 2021.https://t.co/36USZKz6MT pic.twitter.com/CKZLRThL0I
— Econet Wireless (@econetzimbabwe) July 6, 2021
Tudzaa Mar 8, 2021 354